XOOG vs XAWAARO: (Sida ay ku kala adkaan karaan Van Dijk iyo Werner kulanka maanta) – Gool FM
XOOG vs XAWAARO: (Sida ay ku kala adkaan karaan Van Dijk iyo Werner kulanka maanta)
Haaruun September 20, 2020
(London) 20 Sebt 2020. Chelsea ayaa maqribnimada maanta garoonkeeda Stamford Bridge ku marti galineysa murqo waynta Liverpool ee xafidaneysa horyaalka Premier League.
Inkastoo ay Blues dhaawacyo kaga maqan yihiin xiddigo muhiim ah misane kulanka waxaa isha lagu wada hayaa waxa dhex mari doona weeraryahankooda cusub Timo Werner iyo xoog waynaha Virgil van Dijk.
Werner ayaa bandhig fiican la yimid kulankiisii ugu horreeyay Premier League ciyaartii ay Chelsea ka adkaatay Brighton inkastuu ciyaarta kaddib wareysigiisa ku qiray inuusan weligii ka hor imaan daafacyo sidaan oo kale u xoogan.
Laakiin warkaas i qarso ayay noqonayaan marka loo eego xiddiga uu maanta ka hor imaan doono ee Van Dijk.
Joog dheeraha reer Holland ayaa 5 inches oo nadiif ah ka dheer weeraryahanka reer Germany taa oo ka dhigan in Werner uu biyo ka cabi doonin kubbadaha sar sare, balse taa badalkeeda wuxuu kaga adkaan karaa dhanka Xawaaraha.
Van Dijk iyo Gomes oo xawaarahooda lagu sheegay saacadiiba 21.4mph iyo 21.5mph ayaa lagu tilmaamaa daafacyada dhexe ee ugu orodka dheereeya Premier League, misane saas ay tahay waxay wajihi doonaan wiil ka xawaaro dheereeya kaa oo sacadiiba ku orda 21.7mph.
Chelsea ayay tahay in kulanka ay iska ilowdo kubbadaha sare sare ay u tuureyso Werner, maadaama laga xoog badan yahay lagana joog dheer yahay, taa badalkeeda waa inay kubbada ugu tuurtaa daafacyada gadaashooda maadaama uu xawaarihiisa aad u sarreeyo.
Sheekadu waa Xoog vs Xawaaro.
Man City oo miiska saartay 55 million euros si ay ula saxiixato xiddig ka ciyaara horyaalka La Liga
Muxuu ka yiri Gareth Bale kaddib markii uu ku soo laabtay kooxda Tottenham??